इजिब्राण्ड चम्काउँदै चन्द्रबहादुर खापुङहाङ - Naya Online
इजिब्राण्ड चम्काउँदै चन्द्रबहादुर खापुङहाङ
नयाँ अन्लाईन बुधबार, माघ ९, २०७५ (January 23rd, 2019 at 7:29am ) ब्लग, भिडियो
“जमिनबाट पानी उम्रिरहन्छ, बग्दै गरेको पानी कहाँ पुग्ला ? कालान्तरमा पृथ्वी भरिएर हामीलाई डुबाउँन त डुबाउँदैन ?”
“एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा निस्कने सुरुङ खन्दा कस्तो होला ?”
आफु सानो छँदा हरक्षण यस्ता कल्पनामा डुबिरहन्थे –चन्द्रबहादुर खापुङहाङ । मानौ न, न्यूटनले झरेको आँप किन माथि गएन भनेर सोँचे जस्तो । एउटा शिक्षित परिवार भए उनी पनि उनकै सोँचसँग मेल खाने शिक्षाको लागि अग्रसर गराउँथे होलान् । र, ति तेह्रथुमका डाँडाहरूमा सुरुङ खन्ने काम गरिरहेका हुन्थे होलान् ।
तर, उनी किरात लिम्बू कुलमा जन्मिएका थिए । र, यस कुलको प्रत्येक छोराहरूले एकपटक गल्लावालको गएर छाती नपाउने लहर नै हुन्छ । उनले पनि छाती नपाए, लाहुरे भए । सानोमा कल्पना गरिएका ति चिजहरू पल्टनमा रहेको बखत कति बुझ्न पाए, कति बुझ्न पाएनन् । तर पल्टनबाट अवकासप्राप्त भएपछि भने संसारका खापुङहरूलाई जोड्ने पुलको काम गरिरहेका छन् । बालककालमा कल्पना गरेको सुरुङमार्ग नै खन्न नपाए पनि विभिन्न भेगमा रहेका खापुङलाई जोड्ने काम भएपछि भने एकअर्कामा परिपुरक भएको मान्छन् ।
उनको परिवारलाई शिक्षित नै मान्नुपर्छ । तेह्रथुमका प्रथम निर्वाचित सभापति तथा माननीय स्व. भीमराज खापुङका दाई हर्कजङ खापुङका नाती हुन् उनी । हर्कजङ खापुङ तेह्रथुममा अङ्ग्रेजी शिक्षा शुरुवात गर्ने व्यक्ति हुन् । बुबा भारतप्रसाद खापुङ र आमा नन्दमाया पन्धाकको जेठो छोरो भएर वि.सं. २००९ साल मंसिर १३ गते जन्म भएको थियो । प्रथम निर्वाचित भएकोले गर्दा बाजेको तेह्रथुममा धेरै राम्रो इज्जत थियो । घरमा लेखापढि गर्न आउने मान्छेहरूको आवतजावतले गर्दा घरैदेखि अध्ययनको शुरुवात भयो उनको । बाजे सभापति भएको बखत बाजेसँग तेह्रथुम आउने भनेको रात पुरै छर्लङ्गै बिताएको अहिलेजस्तै लाग्ने बताउँछन् ।
घरआँगनमै स्थापना भएको गौखुरी स्कुलबाट अध्ययन शुरु गरेर माध्यमिकस्तरसम्म पुरा गरेका छन् । सभापतिको नाती भए पनि गाउँका युवाहरू भर्तिको लाममा उभिएको देखेपछि उनले पनि त्यही लाममा उभिए र वि.सं. २०३० सालमा ब्रिटिस आर्मी बने । “तेह्रथुम सम्दुको गोपे हवल्दार भनिने गल्लाले मोराहाङबाट ५ जनाको टोली छानेर लगेको थियो । जसमा ४ जना भर्ति भए र १ जना भने फर्किएका थिए । घोपा क्याम्पमा अन्तिम सेलेक्सनपश्चात काठमाडौंमा रहेको ब्रिटिस क्याम्प हुँदै हङकङ पुर्‍याइएको थियो । उनको नम्बर २११६०८२२ नम्बर रहेको थियो ।” उनी अतीत सम्झदै भन्छन् ।
लगभग १९ वर्षको नोकरीपश्चात उनी नेपाल फर्किए । फर्किएपछि तत्काल अफ्रिकाको एंगोला भन्ने ठाउँमा वैदेशिक रोजगारको लागि पुगे । एंगोलाबाट फर्केपछि भने धरानमा व्यापार गर्न शुरु गरे । मोटरसाइकल रिपयेरिङको लागि खोलिएको इजि राइडर वर्कसपबाट शुरु भएको उनको व्यापार इजि राइडर रेष्टुरेन्ट, इजि राइडर गोल्डसपसम्म पुग्यो । गोल्डसपले उनलाई धेरै उचाईमा पुर्‍यायो । उनकै सल्लाह र संरक्षणमा धरान, इटहरी, पथरी, मोराहाङसम्म गोल्डसपहरू खोलिएका छन् ।
उनको गोल्डसपबाट मनि ट्रान्सफर, धितो राखेर पैसाको कारोबारलगायतका कामहरू हुन्छन् । त्यही कारोबारबाट उनले बेजोड नै कमाए भन्नुपर्छ । त्यसपछि इजिराइडर होटलको स्थापनाले पूर्वकै शान बनेको छ ।
राजनीति त बाजेकै प्रभाव मान्नुपर्छ । उनी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहुँदै उपाध्यक्षसम्म बने । । उनको अनुसार देशमा धेरै परिवर्तन आइसकेकोले नै देशमा विभिन्न खालको विभेद अन्त्यको लागि आवाज बोक्ने पार्टी भनेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो भन्ने लागेर २०४८ सालदेखि पार्टीमा आवद्ध भएका थिए । पार्टीमा धरान नगरपालिका वडांं. १५ को सचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्यहुँदै उपाध्यक्ष बनेका थिए । तर पार्टी स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टी बलियो हुनुको साटो झनै घट्दो भएपछि पार्टी परित्याग गरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवेश गरेका छन् ।
पार्टीबाहेक किरात याक्थुङ चुम्लुङको नगर तथा जिल्ला सल्लाहकार, पाथीभरा लाइन बाटोको निर्माण समिति अध्यक्ष, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च सुनसरीको सल्लाहकार, वडा नागरिक मञ्च, धरान १५ को अध्यक्षलगायत विभिन्न स्कुलहरूको सल्लाहकार, सञ्चालक समितिको सदस्य रहिसकेका छन् । उनले दिलोज्यान दिएर लागेको संस्था चाही किरात याक्थुङ खापुङहाङ सङजुम्भो नै हो । वंशावली प्रकाशनलगायत दाजुभाईको लागि स्तरोत्तर उन्नतीको लागि लागि परेका उनले सङ्जुम्भोलाई सुनसरी जिल्लास्तर समिति निर्माण गरेका थिए । त्यसैलाई केन्द्रीय तदर्थ समितिको रुपमा बनाइ दुई महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । दुवै महाधिवेशनले उनलाई अध्यक्ष बनाएको छ ।
चन्द्रबहादुर खापुङहाङको पारिवारिक स्थितिभने भर्ति हुनुभन्दा अगाडि नै २०२७ सालमा हस्तरानी थलङसँग उनको विवाह भएका थियो । हस्तरानीको निधन भइसकेको छ । ३ छोरा १ छोरीमा जेठो लोकबहादुर व्यापार व्यावसायमै सक्रिय छन् । माइलो पृण्य खापुङ ब्रिटिस आर्मी र कान्छो महेन्द्र खापुङले वेलायतबाटै स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् । छोरी खासमायाको विवाह भइसकेको छ ।
मार्च १६, २०१९ मा कथाकार जानु काम्बाङ्ग लिम्बूको “नउघ्रेको जून” कृपाका साथ हुलाकमार्फत प्राप्त...
सुजाता निङ्लेकु काठमाण्डौ, २४ । एउटा प्रसिद्ध व्यक्तिको भनाई छ, हामी सबै प्रेमका निम्ति...